लक्ष्मी र एनआईसी एशिया बैंकका कर्मचारी आईसुलेशनमा : संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा किन नगर्ने गर्भनर साब ? - Aathikbazarnews.com लक्ष्मी र एनआईसी एशिया बैंकका कर्मचारी आईसुलेशनमा : संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषबाट कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा किन नगर्ने गर्भनर साब ? -
नेपालमा अदृश्य शक्तिबाट आएको रोग कोरोना भाईरसले १ जनाको मृत्यु भएको छ भने करिब करिब ३ सय जनामा यो भाइरस देखा परिसकेको छ । नेपाल लकडाउनको पीडादायी अवस्थामा छ । नेपाली घरभित्रै छन् । तर, बैंक र वित्तिय क्षेत्र खुल्ला छ । हजारौ कर्मचारी काममा छन् । उनीहरुको सुरक्षा बारे बैंक र राष्ट्र बैंकले अब सोच्ने बेला आयो कि ?
बीमा समितिले ल्याएको राहत कोरोना बीमा कोरोना पोजेटिभ हुने वित्तिकै कोरोना पीडितका आफन्तले तत्कालै पाउने बीमा भएकोले पीडितलाई औषधी मुलो र विरामी कुरुवालाई केही खर्च आउने सरल बीमा भएकाले अब नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरि तत्कालै कोरोना बीमा गर्नु अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ ।
के यो विपत र विषम अवस्थामा कर्जाका ग्राहकलाई २ प्रतिशत व्याज छुट दिन सकिन्छ भने वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुको नाफाको १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा राखिन्छ । यो पैसा हिसाब किताब गर्ने हो भने लाख होइन करोड पनि होइन अर्ब भन्दा बढि छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुसंग यसबाटै बैंक कर्मचारीहरुको कोरोना बिमा गर्ने किन सकिदैन ? यो आवाज अहिले चर्को रुपमा उठेको छ ।
विषम र विपतको बेला जीवनलाई हत्केलामा राखी बैंक पुगेर काम गर्ने हजारौं हजार दक्ष जनशक्तिलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषको पैसाबाट बीमा गरिदिन पाउने व्यवस्था नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले गरिदिनु पर्ने आवाज उठेको छ ।
के यो विपत र बिषम अवस्थामा कर्जाका ग्राहकहरुलाई २ प्रतिशत ब्याज छुट दिँदा हुन्छ भने बैंक पुगेर जीवन जोखिममा राखेर काम गर्ने हजारौ हजार कर्मचरीलाई सो कोषको पैसा खर्च गरि बीमा गर्ने बाटो राष्ट्र बैंकले खुलाउनु किन नगर्ने गर्भनर साब ?
भनिन्छ लक्ष्मी बैंक र एनआईसी एशिया बैकका केही कर्मचारीहरु आईसुलेशन र होम क्वारनटाईनमा छन् । यस्तै महामारी फैलिदै गयो एभने बैंकका सयौं कर्मचारीलाई कोरोना नहोला भन्न सकिदैन । त्यसकारण समयमै केही राहत हुने यो बीमा गर्नु पर्ने चर्को आवाज बैंक र वित्तिय संस्थामा अहिले उठेको छ ।
पछिल्लो समय बैंकहरुलाई सवारी पास अत्यन्तै कम राज्यले व्यवस्था गरेकै कारण एउटै गाडीमा धेरै कर्मचारीलाई पटक ÷पटक गरि अफिस र घर पु¥याउने गरेको एक बैंकका उच्च कर्मचारीले बताए । यसबाट पनि महामारी फैलिने डर देखिन्छ ।
बैंक अत्यावश्यक सेवा भित्र पर्ने भएकोले सेवा दिनु पर्ने दायित्व छ तर, रोगबाट बच्ने उपाय कति सुरक्षीत छ ? गाडीमा बाख्रा झै गरि बैंक कर्मचारीहरुलाई घर र अफिस ओसार पसार गर्ने बैंकहरु कति सचेत छन् । यो प्रश्नको उत्तर बैंकका सीइओहरुसंग छ ?
सबै ठूला भन्दा साना कर्मचारीले कति मेहनत गरेका छन् । यो बिर्सनु पटक्कै हुँदैन ।अरु नसके नेपाल बैंकर्स संघले तत्कालै आज भोली नै राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरि कोरोनाको ५० हजार र १ लाखको बीमा कर्मचारीहरुको गरिदिनु पर्दछ कि पर्दैन ।
यस्तो विषम अवस्थामा केही ठूला बैंकहरुले करारमा राखेका कर्मचारीलाई नाफा घट्ने भन्दै हटाउन तिर लाग्नु भन्दा बैंकका सम्पत्ती कर्मचारीहरुको भविष्यबारे सोच्नु पर्ने देखिन्छ । बैंकका सीइओ साबहरुले हामीसंग अन्र्तवार्तामा कर्मचारीलाई सेवा थप दिने बीमा गरिदिने बताए पनि केही बैंक बाहेक अधिकाशं बैंकहरुले ओभरटाईम नदिएको विदाको पैसा काटिदिएको समेत गुनासो आर्थिक बजार न्यूज डटकमको अफिसको टेलिफोनमा आएको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले त तलब बाहेक सबै बैंकका कर्मचारीका सुविभा काट्ने कुरा पटक÷पटक विभिन्न सञ्चार माध्यामको कुराकानीमा बताउँदै कर्मचारीको मनोबल गिराउने काम गरेको देखिन्छ । यो कत्तिको उचित छ ? पीडा सबैमा छ । नाफा कमाउन सबै ठूला भन्दा साना कर्मचारीले कति मेहनत गरेका छन् । यो बिर्सनु पटक्कै हुँदैन ।
अरु नसके नेपाल बैंकर्स संघले तत्कालै आज भोली नै राष्ट्र बैंकसंग छलफल गरि कोरोनाको ५० हजार र १ लाखको बीमा कर्मचारीहरुको गरिदिनु पर्दछ कि पर्दैन ।
सीइओ साबहरुले लाखौ लाख तलब भत्ता खाने तल्ला कर्मचारीलाई चाहि केही नहुने यस्तो कुन संसारमा छ, गर्भनर साब ?
३ सय देखि १ हजारसम्मको प्रिमियमको कोरोना बीमा गर्न नसक्ने बैंक र विकास बैंकको सीइओ र संचालक समितिले कर्मचारी हाम्रो सम्पत्ती हुन भन्ने अधिकार छैन ? कर्मचारी रहे बैंकले नाफा गर्ने होला । त्यसकारण कर्मचारीको भविष्यको पनि ख्याल गर्ने दायित्व बैंक नेतृत्वको हो कि होइन गर्भनर साब ?
बारामा एनआईसी एशिया बैंकका कर्मचारी आइसुलेसनमा छन् । जनकपुरमा लक्ष्मी बैंकका कर्मचारी होम क्वाराइनटाइनमा छन् । यी त पात्र मात्र हुन् । भोलि महामारीले बैंक कर्मचारीलाई आक्रमण ग¥यो भने त्यसको जिम्मा सीइओ र संचालक समितिले लिने कि नलिने गर्भनर साब ?
ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत छुट दिन उनीहरुले छुटको नाममा घुमाई फिराई अर्बै कमाउने यस्तो विषम र विपतमा । तर, दिनरात काममा खटिएका निरिह कर्मचारीलाई १ लाखको कोरोना बीमा समेत गर्न तयार नहुने यो कस्तो बैंकिङ्ग हो । कस्तो कर्मचारीलाई राहत हो चिसो दिमागले एकपटक सोचौं ।
अझै समय छ । तत्कालै नेपाल बैंकर्स संघको नेतृत्वले राष्ट्र बैंकसंग बहस र छलफल गरि नाफाबाट थुप्रिएको १ प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कोषबाट कर्मचारीहरुको कोरोना बीमा गर्ने वातावरण आजको आवश्यकता हो । आजलाई यत्ति ।
एभरेष्ट बैंकको मुनाफामा सामान्य वृद्धि